Aguero oo ku sii jeeda PSG, Manchester United
Suuqa kala iibsiga Yurub ee bishii Janaayo ayaa si rasmi ah u furmay horaantii Janaayo 2021 kooxaha ayaana doonaya inay hirgeliyaan qorshayaashooda ka hor suuqa.
Yoolalka cad ee Werner
Neymar oo daaha ka rogay sabab la yaab leh
Kooxaha yurub ayaa isku dayi doona inay sameeyaan dhaq dhaqaaq sida ugu macquulsan suuqa jiilaalka iyagoo og inaysan u weyneyn sida suuqa xagaaga oo ay adagtahay in saxiixyo waa weyn la sameeyo bartamaha xilli ciyaareedka.
Intaas waxaa sii dheer, kooxaha Yurub waxay isku dayayaan inay sii xaddidaan saameynta dhaqaale ee infekshinka coronavirus uu ku yeesho kooxahan.
Laakiin sidaan halkan ku baranay, waxaan idinla wadaagaynaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa iyo xanta suuqa dhexdiisa wargeysyada ugu waa weyn Yurub Sabtida.
Tababaraha PSG Mauricio Pochettino ayaa doonaya inuu lasoo saxiixdo weeraryahanka reer Argentina Sergio Aguero si bilaash ah markii 32 jirkaan qandaraaskiisa Manchester City uu dhacayo. (Mirror)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Mesut Ozil ayaa wadahadalo kula jira kooxda reer Turkey ee Fenerbahce, laakiin waxa uu heshiis amaah ah kula saxiixday inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. Sidaas oo ay tahay, Arsenal waxay sheeganeysaa inaysan bixin doonin qeyb ka mid ah mushaarkiisa £ 350,000-toddobaadkii haddii uu ka tago kooxda. (Mas’uulka)
Gunners ayaa lala xiriirinayay inay u dhaqaaqeyso ciyaaryahanka khadka dhexe ee Borussia Dortmund Julian Brandt (24) bisha Janaayo. Naadiga Jarmalka ayaa sidoo kale dooneysa inay iibiso Jarmalka si caalami ah. (Sawir)
Tottenham ayaa xiiseyneysa daafaca Real Madrid Eder Militao, oo 22 jir ah (Mundo Deportivo)
Daafaca reer Belgium ee kooxda Tottenham Toby Alderweireld ayaa diirada u saaran kooxda PSV Einchoven. (The Telegraph)
Kooxda Isbaanishka ah ee Valencia ayaa wadahadalo la furatay Tottenham oo ku saabsan ciyaaryahanka khadka dhexe Harry Winks, laakiin waxay diiday inay aqbasho dalabka Spurs ee 24 jirka. (AS)
Daafaca Atletico Madrid Kieran Trippier, oo 30 jir ah, ayaa doonaya inuu u dhaqaaqo Manchester United bisha Janaayo, laakiin waxaa looga hortagi karaa ganaax 10 isbuuc ah. (TalkSport)
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa u sheegay goolhaye Sergio Romero oo 30 jir ah iyo daafaca Marcos Rojo oo 30 jir ah inay bixi karaan bisha Janaayo. (RAG)
West Ham ayaa dooneysa 21 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Arsenal Eddie Nketiah si ay ugu buuxiso booska Sebastien Haller oo ku biiray Ajax. Bournemouth ayaa sidoo kale dooneysa weeraryahan Joshua King iyo sidoo kale Boulaye Dia oo ka socda Stade Reims oo liiskooda ku jira. (Heerka Caawa ee London)
Everton ayaan kala hadli doonin kooxda Talyaaniga ee Roma iibka 28 jirka reer Brazil Bernard, sida uu sheegay tababare Carlo Ancelotti. (Liverpool Echo)
Laakiin Ancelotti ayaa diyaar u ah inuu talaabo horey u qaado weeraryahanka PSG Moise Kean, 20, kaasoo haatan amaah ugu ciyaara kooxda reer France. (Mas’uulka)
Bayern Munich ayaa qarka u saaran inay wax ka qorto wax ku saabsan daafaca bidix ee Omar Richards si xor ah, iyadoo 22 jirkaan qandaraaskiisu dhacayo xagaaga. (Sky Sports).
Basaska ugu sareeya 10
UNHCR waxay diiwaan galisay 11,265 Liibiya